के यौनसम्बन्धबाट कोरोना सर्छ ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ के यौनसम्बन्धबाट कोरोना सर्छ ?
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७७ असोज २९ गते, २०:३८ मा प्रकाशित
कोभिड-१९ हाल विश्वभर नै एक त्रासको रुपमा फैलिएको छ । सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको पहिलो केसको १० महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म यस विरुद्धका कुनैपनि औषधी पत्ता लागेको छैन ।
यसका विकल्पका रुपमा विशेष रुपमा आपसी सामजिक दूरी कायम राख्न विज्ञहरुले सुझाउदै आएका छन् । यसैबीच दूरीविना असम्भव रहेको सम्भोगको दौरानमा पनि व्यक्तिमा कोरोना सर्छ त? या यसको सम्भावना कति रहन्छ भन्ने जिज्ञासा कयौंको मस्तिष्कमा उब्जिएको एक साझा प्रश्न हो ।
हामी सबैलाई थाहाँ छ, कोरोना भाइरस एकबाट अर्काे व्यक्तिमा सजिलै सर्ने भएकाले पनि दिन प्रतिदिन यसको संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दै गएको हो । तर, यौनसम्बन्धमा दुई जोडिबीच दुरी मान्य रहदैन । तसर्थ, यस अर्थमा भन्नुपर्दा, पनि सम्भोग वा यौन सम्बन्धको दौरानमा पनि व्यक्तिमा एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा यसको संक्रमण सर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।
अर्थात्, यौनाङ्ग माध्यमबाट कोरोना भाइरस एकबाट नसर्ने भएता पनि यसका लागि व्यक्तिबीच हुने निकट,समीप्य तथा चुम्बनको माध्यमबाट भने एक आपसमा सजिलै भाइरस प्रसारण हुन्छ । यस्तै, संक्रमित एक पार्टनरको ¥याल वा थुक छोएको हातले आफ्नो आँखा, नाक वा मुखमा छुएमा यसबाट पनि संक्रमण सजिलै प्रसारण हुन्छ ।
यस्तै, पछिल्लो पटकको एक अनुसन्धानले व्यक्तिको वीर्यमा पनि भाइरसको अस्तित्व भेटिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, हालसम्म वीर्यकै माध्यमबाट संक्रमण प्रसारित भएको कुनैपनि केश भने बाहिरिएका छैनन् । तसर्थ यससम्बन्धि थप अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले जनाएका छन् । यद्यपि यौनसम्पर्ककै समयमा एकआपसमा संक्रमण प्रसारण भएका केशहरु भने थुप्रै रहेका छन् । उसोभए के यस महामारी क्रममा यौनसम्बन्ध कायम राख्नु उचित हुदैन त?
संक्रमणबाट बच्नका लागि सामाजिक दूरी राख्नु आवश्यक भएपनि यौनसम्बन्धबाट भाग्नु यसको उचित विकल्प भने कदापि हुन सक्दैन । अझ, सम्भोगले व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक पक्षलाई सबल बनाउदै प्राकृतिक रुपमा प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउन समेत मद्दत गर्ने भएकाले पनि यस समयमा यौन सम्बन्धको महत्व अझ बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । यद्यपि, यस समयमा संक्रमण प्रसाररित नहोस् भन्नका लागि प्रत्येक जोडिले निम्न पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छः
कोरोनाका लक्षण देखिएका समयमा सो व्यक्तिसँग यौनसम्बन्ध कायम नगर्ने
सकभर चुम्बनबाट बच्ने,
रुघाखोकीको दौरानमा पनि सकभर शारीरिक सम्बन्ध कायम नराख्ने,
त्यस्ता समयमा विकल्पका रुपमा व्यक्तिले हस्तमैथुनको उपाय अपनाउने,
सम्पर्कको दौरानमा हात आँखा, नाम र मुख वरपर नलैजाने,
यौनक्रियाको समयमा पनी मास्कको प्रयोग गर्ने,
सेक्स–टोयको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले प्रयोगपूर्व साबुनपानीले राम्ररी धुने,